Andry Rajoelina : Kandidàn’ny SEFAFI -
AccueilSongandinaAndry Rajoelina : Kandidàn’ny SEFAFI
Andry Rajoelina : Kandidàn’ny SEFAFI
Raha averina eo ambany mason’i Sahondra Rabenarivo daholo angamba ny lahatsoratra nosoratany sy ny teny naloaky ny vavany nandritra iny Tetezamita iny momba izany Andry Rajoelina izany, tsy mahita izay hametrahany ny tongony ity mpahay lalàna nivoaka tao amin’ny oniversiten’i Harvard ity. Hatairana ny an’ny rehetra raha nahita fa isan’ireo mpanohana an’i Andry Rajoelina ny tenany ankehitriny, ary anisan’ny nandray anjara tamin’ilay IEM. Manala baraka tanteraka ity oniversite malaza ity izao fihetsik’i Sahondra Rabenarivo izao, satria olona manana ny maha izy azy, mijoro amin’ny foto-keviny ary manohitra izany fitiavam-pahefana miorina amin’ny rà mandriaka izany no fahafantarana ireo manam-pahaizana mivoaka avy ao amin’ity oniversite Harvard ity, izany hoe, tsy afaka ny hiara-dalana amina mpanongam-panjakana, mpanao sorona ny ain’ny vahoaka ao aminy mba hahazoana fahefana.
Saingy niavaka tamin’ireo manam-pahaizana rehetra nivoaka avy tao amin’ny oniversite Harvard i Sahondra Rabenarivo. Nilatsaka ny saron-tavany, ary voaporofo izao fa tia fahefana sy voninahitra ny tenany ka nahavita nandrodana ny foto-kevitra nijoroany. Olana mpahazo ireo avara-pianarana malagasy sasanttsasany nianatra tany ivelany ihany anefa izao mahazo an’i Sahondra Rabenarivo izao, tsy ambony tsy ambany tahaka ny lohalik’alika rehefa tonga eto an-tanindrazana, hany ka voatery « mivaro-tena » mba hahazoana izay voninahitra sy fahefana izay.
Voaporofo koa izao ny fahamarinan’ny resaka nambara teto amin’ny gazety, volana maromaro, izay nilaza fa manana kandidà ny SEFAFI satria tsy misy lojika amin’ny fihetsiky ny SEFAFI nandritra ny Tetezamita mihitsy ireny fanambarana nataony ireny. Mazava ihany koa ny antony nidirany ho mpikambana tao amin’ny SEFAFI, mbola manamafy ilay fitiavana voninahitra sy fahefana voalaza etsy ambony ihany, ary ny karazan’olona tahaka an’i Sahondra Rabenarivo itony mihitsy no tena fositra nahatonga izao fahavoazan’ny firenena izao. Afa-baraka tanteraka ilay oniversite namoaka olo-malaza sy manana ny maha izy azy maneran-tany, ary ny tena mampanongo tena ao anatin’izany rehetra izany dia Malagasy efa ananan’ny vahiny fijery tsy dia mahafinaritra loatra noho ny zava-misy eto amin’ny firenena no mbola nanimba endrika ny oniversite Harvard tahaka izao.